Transposh - Breaking ဘာသာစကားအတားအဆီးများ - အ transposh.org wordpress plugin ဟန်ပြနှင့်ထောက်ခံမှုဆိုက်
version 0.9.8.0 – ကွိုဆို Yandex မှ
အောက်တိုဘာလ 28, 2015 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 1 မှတ်ချက်လေး
ကိုယ့်ကို Google Translate ထက်ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့ပိုပြီးရှိပါသည်, ကိုယ့် Bing မှ Translate ထက်ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့ပိုပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်, ပုံ ~ သန်း 150 ရုရှားကိုလည်းအလွန်ကြီးစွာသောပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နေတယ်, Yandex မှအတူ, ရုရှားနိုင်ငံရှိလူကြိုက်အများဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်.
Yandex မှဘာသာစကားမြားစှာထောကျပံ့နှင့်အခြားအင်ဂျင်တို့ထက်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နေ, ဒါကြောင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအဘိဓါန် Bashkir အဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံအအတွင်းအပြင်ပြောပြီဖြစ်ကြောင်းဘာသာစကားများအထူးပြု, အဘိဓါန် Kirghiz နှင့်အဘိဓါန် Tatar. သောငါတို့သည်ယခုဘာသာစကားများစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်တတ်နိုင်ခဲ့ကြ, တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါဖို့ထောက်ခံ Auto-ဘာသာပြန်ထားသောဘာသာစကားများစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုအောင် 95!
Yandex မှများ၏များအပြင်လည်းငါတို့က auto ဘာသာပြန်ချက်များကိုနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အလမျး၌ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်, ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုချင်ပါတယ်ဘာသာပြန်အင်ဂျင်စက်၏ preference ကိုတင်ထားရန်ယခုဖြစ်နိုင်.
ငါတို့သည်လည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ် (ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာဆိုလို) ဒီအလွှတ်ပေးရန်အတွက် fixed bug တွေ, အပြောင်းအလဲကို log ကသင်သည်ဤကောင်းသောအရသာအားငါပေးမည်:
Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးမှတဆင့်ပိုမိုနှစ်သက်ဘာသာပြန်များအမိန့်ကိုရွေးချယ်ဖို့ထို option ကို Added
ပို့စ်ဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ထုတ်ဝေအပေါ်ဘာသာပြန်ဆိုအတွက်အရေးပါသည့် bug ကို fix
ဘာသာစကားရွေးချယ်ရေး UI ကိုကျွနုပ်အတွက် (ရှည်လျားဘာသာစကားနာမည်တွေ)
ပထမဦးဆုံး click နှိပ်ပြီးအပေါ် loading မဟုတ် fix ဘာသာပြန်ချက်ပေးတဲ့ dialog
နောက်တဖန်မပြင်ပမှ Google က key တွေကိုဖော်ထုတ်
ထို utility tab မှာစင်ကြယ်သောအော်တိုဘာသာပြန်ချက်များကို Fix
ပံ့ပိုးမှုအဘိဓါန် Bashkir, Yandex မှမှ Kyrghiz နှင့်အဘိဓါန် Tatar ကျေးဇူးတင်စကား – အခုတော့ supporting 95 ဘာသာစကားများကို!
Bing မှရန်ဆွာထောက်ခံမှု Added
လူအပေါင်းတို့အားဘာသာပြန်ဆိုအတွက်ပို့စ်များအကြားလျှော့ချချောင်းမြောင်းအချိန်2စက္ကန့်
တစ်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကသည့်အခါ shortcodes Fix <ကို p> tag ကို
နယူးက Google icon ကို
wordpress မှာများအတွက် WP_Widget deprecation ခေါ်ဆိုခကို fix 4.3
က https urls ကိုပြန်ပြင်ဖို့မရသောအခါအချို့ကိစ္စ Fix
သုံးစာတစ်စောင်ဘာသာစကားများအတွက်ပြန်လည်ရေးသားထောက်ခံမှု Fix (လောလောဆယ်တွင်သာသောအခါ)
version 0.9.7.2 – အတိုကောက် shortcodes
ဇူလိုင်လ 29, 2015 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ဒီဗားရှင်းကိုပြန် Google က proxy ကိုဖြေရှင်းပေးတယ်, ကျနော်တို့ကယ့်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါသောအရာရှိပါသည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲ. သို့သော်နောက်တဖန်အ, အဆင်ပြေတယ်.
အခြားပြောင်းလဲမှု shortcodes တှငျအခြို့ကျွနုပ်သည်, သငျသညျကိုအောက်ပါ link ကိုအတွက်အများကြီးပိုမိုကောင်းမွန်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်:
Transposh wordpress ကို plugin ကိုအတွက် Shortcode ထောက်ခံမှု
အဓိကအပြောင်းလဲမှုများနောက်ထပ်ထည့်သွင်း [tpe] အဟောင်း၏ထိပ်ပေါ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည့် shortcode .
ဒီ code မိမိကိုယ်ကို enclosing codes တွေကိုအသုံးပြုသည်, ထိုသို့ tag ကိုပိတ်ဖို့ရန်မလိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိ, ဒီဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသော wordpress ကိုအတွက်ကြောင့်အသိပေးချက်ဖြစ်ပါသည်
code ကို Self-ပူးတွဲခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲ shortcodes ဖော်စပ်သောအခါအဲ့ဒီနောက်သွားကြဖို့ parsing.
လည်း, သတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ ="y" နောက်တဖန်, ဒါကြောင့်ယခု [tpe mylang] ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် output ကိုလိမ့်မည်: my
version 0.9.7.1 – ကျနော်တို့ကအသစ်ဆိုက်ပြီ
ဇူလိုင်လ 22, 2015 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ပထမဦးဆုံးအရာပထမဦးဆုံး, ကျနော်တို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း LPK စတူဒီယိုထဲကနေခရစ္စတိုဖာကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် – http://lpkstudio.com/ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ၏အသစ်ဒီဇိုင်း, ဒီ site အသစ်ဒီနေ့အသစ်ဟာ web စံချိန်စံညွှန်းများအထိနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်မှာမြင်သာဖြစ်သင့်.
ကျနော်တို့ကယ့်ကိုဒီအပေါ်ခရစ္စတိုဖာအတူလုပ်ကိုင်ခံစားခဲ့ရ, သူကအလွန်ထိရောက်ခဲ့, တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟုမေးမီကပင်လိုအပ်သိ🙂
အဆိုပါ site အသစ်အသစ်တခုလွှတ်ပေးရန်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်, ဒီနေရာမှာအဓိကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်အနည်းငယ် bug တွေကြောင့်ဒိုဒိုငှက်ရဲ့လမ်းကိုထွက်သွား.
နောက်တဖန်သင်တို့ကိုသုံးနိုင်ပါသည် + ဘာသာပြန်ချက်များကိုထဲမှာသင်္ကေတ
အချို့အခါသမယအတွက်, ရှည်လျားအပိုဒ်က Google အနေဖြင့်သင့်လျော်သောအလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်ရဘဲ
ဗားရှင်းအသစ်ကိုခံစားပျော်မွေ့, သင်တို့သည်ဤအပြည့်အဝဗားရှင်းမှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သေချာအောင်, ၎င်း၏အခမဲ့.
« previous စာမျက်နှာ